Maitiro ekumisikidza Apple Music pane yako Amazon Echo uye Alexa | IPhone nhau
Luis Padilla | | App store, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple Music ichangosvika pa Alexa muSpain, uye zvinoreva Tinogona ikozvino kuteerera mimhanzi pane chero Amazon Echo kana Alexa-inoenderana smart mutauri tichishandisa kunyorera kwedu kuApple kufambisa sevhisi, chimwe chinhu icho kusvika parizvino chaingo goneka paPambaPod, Apple's smart speaker.
Munyaya ino Isu tinotsanangura danho nedanho maitiro ekumisikidza Apple Music mune iyo Alexa application ye iPhone yako kana iPad kukwanisa kushandisa sevhisi pane maspika ako, pamwe nekumisikidza seyakajairwa sevhisi kuitira kuti kana iwe uchiraira mimhanzi kuburikidza nezwi rako iwe unoshandisa zvakananga Apple Music.
Iyo yekumisikidza maitiro yakatwasuka, asi yakati wandei yakavanzwa mukati meiyo Alexa app ye iPhone kana iPad. Apple Music haina kugadzirirwa mukati meApple "Zvirongwa" menyu, zvirinani pakutanga. Ndihwo "hunyanzvi" hwatinofanira kutsvaga uye hwacho sezvazvinoonekwa mu "Unyanzvi nemitambo" menyu. Tichafanirwa kutsvaga Apple Music mune inoenderana chikamu uye kana yawanikwa, "^ Bvumira kushandiswa kwayo". Tinofanira kupa Alexa mukana weakaundi yeApple Music (zviri pachena kuti zvakakosha kuti unyore unoshanda) uye uteedzere nhanho dzese dzinoratidzwa.
Kana tangopa mukana weApple Music, inotipa sarudzo yekuimisa seyakajairwa sevhisi. Kana isu tisingade kuzviita panguva iyoyo, tinogona kugara tichiwana chikamu ichi mu "Zvirongwa> Mumhanzi> Default services". Iye zvino tave kugona kuwana rese reApple Music katalog uye edu ekuridza mazita kubva kune chero Alexa-inoenderana mutauri, senge Sonos One uye Beam, uyezve kubva chero yeAmazon Echo modhi. Hapana mubvunzo danho rakakura reApple Music, ine mamirioni eEcho zvishandiso kutenderera pasirese, iyo inorasikirwa neimwe yemipimo yayo mikuru: kusavepo kunze kwePambaPod, mutauri wemhando yepamusoro asi nemutengo uyo kune vashandisi vazhinji unodarika izvo iwe ronga kushandisa pane smart speaker.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekumisikidza Apple Music pane yako Amazon Echo uye Alexa
Mhoroi, ini ndaida kuziva kuti ndoita sei kana ndiri wekuChile?
Mhoroi, ini ndaida kuziva kuti ndoita sei kana ndiri wekuChile? Iyo Alexa sevhisi inoratidza kuti iyo sevhisi yeTunes haisati yavapo kudunhu rino.
Apple Music inosvika kuAmazon Echo uye maA Alexa madhi muSpain neGerman